Zingaki izindlela ezingasetshenziselwa ukumaka ukwakhiwa?
Abstract: Ububanzi bolayini bomshini wokumaka uhlobo lokuchofoza ngesandla kunqunywa ububanzi be-hopper, imvamisa okuyi-100mm, 150mm, 200mm. Izingubo ezishisayo ezincibilikayo zidinga ukufudunyezwa zibe phakathi kuka-180-230 degrees Celsius ukufaka isicelo. Indlela yokwakha ukumaka ingahlukaniswa cishe ibe yimanuwali ...
Yiziphi izinzuzo zamajethi amanzi anomfutho ophakeme wokumaka ukususwa?
Njengamanje, lapho ukumakwa komshini wokuqhumisa amanzi ephezulu kusuliwe, ngoba eminye imisebenzi inezidingo eziphakeme futhi eziphakeme zokuvikelwa kwemvelo, indlela yokususa indiza yamanzi ephezulu isivele ngesikhathi somlando, futhi isibe uhlobo lokumaka ukuthi ...
Ihlukaniswa kanjani imishini yokumaka umgwaqo?
Umshini wokumaka umgwaqo onamaqembu amabili: Ukumaka izingxenye ezimbili ukumaka okuphezulu okwenziwe eminyakeni yamuva. Kuhlukile kokumaka okushisa okushisayo nokumaka okushisa okujwayelekile ngenxa yokwehla kwamazinga okushisa noma ukuncibilikisa (okususelwa emanzini) kanye nezinye izindlela zokomisa ngokomzimba ukwakha ifilimu yokumboza ....
Yiziphi izici ezinkulu zomkhiqizo womshini wokumaka?
Izici zomkhiqizo womshini wokumaka: I-S7000 esebenza kahle kakhulu nokugeleza okukhulu ingaxhuma ngqo izibhamu ezimbili ukuze zisebenze ngasikhathi sinye, okuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle komsebenzi futhi kusekela ukusetshenziswa kombhobho omkhulu wosayizi. Inamandla: Izinga lokugeleza kuka-5.8 l / min lenza ukuthi i-SF7000 kufanele ukuthi ibe ...
Imuphi umshini ongasetshenziselwa ukugezwa okukhulu kokumaka umugqa wokuhlanza？
Ukuhlanzwa kokumaka kwensimbi yokususa umgwaqo egandayiwe akugcini nje ngokunciphisa ingcindezi yamanzi ngokujwayelekile, ngoba indiza yamanzi inethonya elinamandla amakhulu namandla okusika, sekuvele ibhande elibanzi lokuhlanza. Ukwakhiwa okuluhlaza kulula. Yonke imigwaqo izocwengeka ngokweqile ...
Yini okufanele ukunake lapho uhlanza ukumakwa komgwaqo
Ukuhlanza umaki kungavimbela ukuqhuma komshini. Okusinda kangcono, ukwakhiwa endaweni encane yesifo sohlangothi, indlela eqhubekayo yokuzihambela kumgwaqo ophahleni lwesamente, umgwaqo omkhulu webhuloho, ibhuloho elixegayo, umshini wokugaya ugandaganda ekuhlanzweni kolayini bokumaka, i-milling wid ...
Yiziphi izinto ezisetshenziselwa ukumaka ukususwa?
Umugqa ophawuliwe wokuhlunga umugqa wemagnetite okhulayo ukhulisa ukumelana kokugqoka ngama-20 ~ 35% uma kuqhathaniswa nezinto ezijwayelekile zokuhlunga i-magnetite. Ungabhekisa kokuhlangenwe nakho okuyimpumelelo emkhakheni, kufaka phakathi ukucwaninga nokuphakanyiswa kwesihlungi semidiya sokuhlunga esinezingqimba ezintathu, umbhede wokuhlunga we ...
Ungaguqula kanjani umshini wokumaka ngemuva kwephutha?
Umshini wokumaka uqala ngokufaka isisusa sopende se-thixotropic ekumaka umgwaqo okufanele ususwe ukuze wenze ukuxhumana okuphelele nopende womgwaqo ozosuswa. Ngaphansi kwesenzo sokususa upende, upende womgwaqo uzongena, uvuvuke, futhi uvuvuke ngemizuzu engu-2-10. Izinguquko zomzimba nezamakhemikhali ezinje ...
Uyini umphumela wesigxobo sebhokisi lesitimela esinejubane eliphezulu sohlobo lweshizolo lohlobo lokuqala lokucindezela?
Ingxenyana yemishayo yesivinini sebhokisi lesitimela esinejubane eliphezulu (ugongolo osekhethiwe) womshini wokusika izinwele wohlobo lokuqala lokuchofoza ugcwale ukwelashwa okungangenwa ngamanzi. I-chiseling ekhonkolo ohlangothini lwebhuloho, ubuso bokuphela kwebhuloho, uhlangothi lwensimbi, ubuso bokugcina bendawo. Susa ukumbozwa komhlaba, upende, nezimpawu ezahlukahlukene zethrafikhi ...